सुत्केरीको मृत्य भएपछि वीपी प्रतिष्ठान धरान तनावग्रस्त – Online Bichar
सुत्केरीको मृत्य भएपछि वीपी प्रतिष्ठान धरान तनावग्रस्त
Online Bichar 27th February, 2020, Thursday 4:03 PM
इटहरी, १५ फागुन । सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुत्केरी गराउन लगिएकी बिरामी महिलाको मृत्यु भएपछि वीपी प्रतिष्ठान धरान तनावग्रस्त बनेको छ ।
बिहीबार बिहान मृतकका आफन्तलाई प्रतिष्ठान प्रशासनले वार्ताका लागि अडिटोरियम हलमा बोलाएको भए पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी समयमै नआएका कारण वार्ता नभएको आफन्तले बताएका छन् । अहिले वार्ता भइरहे पनि वार्ताको पूरा विवरण आइसकेको छैन । वार्तामा प्रतिष्ठानका डा. अर्चना ठाकुर, डा. रोहित रिजालसहितको टोली छ भने मृतकका तर्फबाट आफन्त सहभागी रहेका वताइएको छ ।रासस